IPlanethi yokuLawula uMhlaza kunye nendlela yokuThetha kwayo - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nophawu Lomntu
IPlanethi yokuLawula uMhlaza kunye nendlela yokuThetha kwayo
Umhlaza ulawulwa yiNyanga etshintsha rhoqo. Ulwimi lunemiphetho ngamagama malunga nokunyanzeliswa kweNyanga: inyanga, inyanga, ukutshata, inyanga, inyanga. Njengoko iNyanga itsala uMhlaba kuye, uMhlaba uyakwazi ukugcina yonke into ikwindawo yayo, ngaphandle kwamanzi. Umzimba womntu uqukethe 55 - 78% amanzi ngokobunzima. Iimvakalelo zabantu, njengolwandle loMhlaba, ukujija kunye nokujikeleza kwisingqi seNyanga. Lawo ngamandla eplanethi elawulayo yomhlaza.
Inyanga yeenkwenkwezi ibonisa impendulo yakho yokungazi kakuhle kwimicimbi kunye nabantu. Njengomlawuli weCancer, iNyanga:
Idibanisa ngokuthe ngqoUmhlazakumzimba wabo weemvakalelo, umama, ikhaya, kunye nosapho, kunye nobuntwana babo.
Yomeleza intuition, iimvakalelo kunye nemikhwa yabo.
Ubanika 'uluvo lwesithandathu' olunamandla.
Kwandisa ezona mfuno zisisiseko zokuphila, imfuno yabo yokuziva bekhuselekile kwaye bekhuselekile kunye nemfuno yabo yokufumana indlwana, ukukhulisa nokukhathalela abanye.
Bequeaths kubo ngememori ende kakhulu, ibenza nostalgic, kwaye ibenze bakwazi ukufunda kwiimpazamo zabo zangaphambili.
IPlanethi yokuLawula iVirgo kunye nenjongo yoBomi bakho
IPlanethi yokuLawula ye-Aquarius kunye nokubaluleka kwayo
Kuchazwe ii-Scorpio Decans ezi-3
NjengeUphawu lweKhadinali yaManziZodiac, Cancers zisebenza ngokwemvakalelo kwiimvakalelo zazo. Ngaphezulu kwawo nawuphi na umqondiso welanga, umhlaza uqhutywa ziimvakalelo kunye neemvakalelo zabo.
Umhlaza kunye neemvakalelo
Iimvakalelo, ezinje ngovuyo, uthando, usizi, uloyiko, okanye umsindo, ligazi lobomi kwiCancer. Iimvakalelo zenza ukuba uMhlaza uzive uphila kwaye wenze ubomi babo babe ngamava aphilayo, okuphefumla. Xa umhlaza uxakanisekile ngokweemvakalelo, inyani iyagqwethwa, kwaye kunzima ukucinga ngokucacileyo, ukhethe ngobulumko, okanye uqwalasele iziphumo. Kwelinye icala, xa baziva bekhuselekile, bekhathalelwe, kwaye bethandwa, bonwabile kwaye banokuba nenjongo. Kodwa njengeNyanga eguqukayo, iimvakalelo zomhlaza ziyajika kwaye zijike. Umhlaza ungatshisa umzuzu omnye ube lusizi olandelayo. Yiyo loo nto udumo lwabo lokuba neemvakalelo ezingagungqiyo.
Inyanga njengoMlawuli woMhlaza
Njengomlawuli weCancer, yiNyanga eyenza ukuba iiCancer zizive ziphila ngokuzishiya zineemvakalelo eziguqukayo nezinamandla. Yonke into malunga neNyanga kwitshathi yokuzalwa yomhlaza inefuthe elinamandla nelingqalileyo kwiimpawu zabantu abazelwe phantsi komqondiso woMhlaza.
Umhlaza kunye noMqondiso wenyanga yabo
Unxibelelwano loMhlaza kwiNyanga kuthetha ukuba bachaphazeleke ngokunzulu luphawu lweNyanga yabo. Ukuba ungumhlaza kwaye ufuna ukwazi ukuba kufanele ukuba uhlakulela ntoni ebomini bakho, jonga kwiumqondiso weNyanga yakho.Imizekelo:
Umhlaza kunye neNyanga kwii-Aries kufuneka ukhulise umoya wabo owomeleleyo, ozimeleyo kuba baya kuziva bonwabile, bekhuselekile kwaye bekhuselekile xa beqala kwaye bekhokela.
Umhlaza onenyanga eNyanga eScorpio kufuneka uhlakulele amandla abo okuthemba kuba baya kuziva bekhuselekile xa benokwabelana nabanye ngeemvakalelo zabo ezinzulu.
Umhlaza ungazisebenzisa njani inyanga zawo ebomini
Umqondiso wenyanga ubeka ukuthanda kukaMhlaza nokungathandwa kwaye ubakhokelele apho kwaye bazive bekhuselekile, kwaye bekhuselekile kubani.
Iintsana ezinomhlaza kunye naBantwana
NgelixaiLanga lomntwanaunokwazisa umzali malunga noko kufunwa ngumntwana wakhe ukuze abe ngumntu omkhulu ozithembayo. INyanga ixelela umzali ngeemfuno zomntwana wakhe ngokweemvakalelo. Kumntwana onomhlaza, olawulwa yiNyanga yakhe, ukuba iimfuno zakhe zeemvakalelo ziqinisekisiwe kwaye azalisekiswe kubaluleke kakhulu. Umqondiso wenyanga womntwana onomhlaza unika ukuqonda kwinto abayifunayo kuMama ukuze bazive bekhuselekile, bekhululekile kwaye bekhuselekile. Imizekelo:
Umhlaza womntwana oneTaurus Moon ngoyena mntu uzolileyo kwaye ochukumisayo ofuna ukuchukunyiswa nokugonwa.
Umhlaza onomntwana oneenyanga ezingama-Aries ngumntwana osebenza kakhulu ofuna ukuvunyelwa ukuba enze izinto ngokwakhe.
Umhlaza Umntwana onomhlaza kwiCancer Moon ubuthathaka kakhulu, kwaye ngaphezulu kwakhe nawuphi na umntwana ufuna ukhuseleko kunye nokondla ubomi bosapho.
INyanga yoMhlaza kunye noBudlelwane
Ubudlelwane bezithandani zihlala zibandakanya iimvakalelo, kunye aUmhlaza womntuokanyeUmhlaza womfaziInyanga sisalathiso sohlobo lomntu onomdla kuye kubudlelwane bezothando. Kunye nokuba ngubani onokukhetha ukutshata naye. Umhlaza unesidingo esandisiweyo sokunxibelelana ngokweemvakalelo nabo babathandayo, batsaleleke kubantu abaqinisekisa imeko yabo yeemvakalelo, kunye nabo baziva bekhululekile kwaye besekhaya.
Inyanga yomhlaza kwi-Synastry
Xa umhlazaInyanga idibanisa ngokuqinisekileyokwenye iNyanga yomnye umntu kwiukuvumisa ngeenkwenkwezi, kukho ukuvumelana ngokweemvakalelo kunye nentetho ekhululekileyo yeemvakalelo kubomi bemihla ngemihla yesi sibini. Umhlaza umalunga nokuzalela kwaye aba babini banokwabelana ngokulula ngendawo yokuhlala kwaye bachitha ixesha elininzi kunye.
Ukuba iNyanga yoMhlaza iku:
I-Aries, i-Leo, okanye i-Sagittarius, banokukhawuleza benze ubudlelwane bemvakalelo nabanye abaneNyanga yoMlilo.
I-Taurus, iVirgo, okanye iCapricorn, baya kuziva bekhuselekile kwaye bekhuselekile nabantu abanophawu lwenyanga lweNyanga.
Umhlaza, iScorpio, okanye iiPisces, zinokuba lula kunye nabanye abanophawu lwenyanga lwenyanga.
IGemini, iLibra, okanye iAquarius, baya kuziva beqinisekisiwe ngokwasemphefumlweni nabantu abanophawu lwomoya wenyanga.
Inyanga yomhlaza kunye nomsebenzi
UKUYAUmsebenzi womhlazainokuba nobuchule bokuyila, ishishini, okanye into eyahluke ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, uMhlaza uya kufumana nzima ukudibanisa ngokweemvakalelo nomsebenzi apho baziva benceda abanye kwaye benza ifuthe kubomi babo. INyanga, njengomlawuli woMhlaza, inokubakhokela ukuba bafune imisebenzi enxulumene nomqondiso wayo. Njengomzekelo, iCancer ene-Scorpio Moon inokutsalwa kuphando lwezonyango. Ngelixa uMhlaza onenyanga yeLibra unokukhetha ukuba ngumtshato.
Indlu yeenkwenkweziapho iNyanga yoMhlaza ihlala khona inokunika imikhondo ebalulekileyo kwisizathu sokungazinzi okungapheliyo kweemvakalelo. Le yindawo yobomi apho kunokwenzeka ukuba kubekho utshintsho rhoqo okanye amahla ndinyuka. Kukwezi ndawo ukuba uMhlaza kufuneka uhlakulele ukunamathela okunzulu kunye nemvakalelo yokwenyani yokwaneliseka ngokweemvakalelo. Njengomzekelo, ukuba iNyanga yoMhlaza ikwindlu yesibini, kubalulekile ukhuseleko lwezezimali. Nangona kunjalo, banokugcina imali ngolunye usuku, bachithe imali elandelayo, kwaye baqhubeke nokukhwela kuhambo olungqongqo kwezoqoqosho.
Iiplanethi ezilawulayo zibaluleke kakhulu xa kutolikwa itshathi yendalo. Oku kuthetha ukuba uyiqonde ngokupheleleyo into elawulwa nguMhlaza, iNyanga, ulawulo, kubalulekile ukuba ube nesisekoukuqonda iiplanethi ezilawulayo.
Malunga Bantwana Clothing Ukwenza Isepha Eyabantu Izacholo Isilivere Izacholo Buza Ingcali!
imidlalo emnandi edlalwa esikolweni ekhompyutheni
uyenza njani indoda ye capricorn ibenomona
ingakanani inkcukacha kwimoto
oza kunxiba ntoni kwiholide yenqanawa yokuhamba ngenqanawa